जनप्रतिनिधिको सडक ममर्तमा विकासे सेल्फी – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNepalजनप्रतिनिधिको सडक ममर्तमा विकासे सेल्फी
जनप्रतिनिधिको सडक ममर्तमा विकासे सेल्फी
October 15, 2019 Rohit Basnet Nepal, Pokhara 0
असोज २८ पोखरा : सामाजिक सञ्जालमा केही समय बिताउने हो भने निराश नै निराश पोखिएका अचम्मित कुराहरु देखिन्छन । दैनिक जीवन यापन गर्ने क्रममा मान्छेले पाइला पाइलामा भोगेको अनुभवनहरु नै सामाजिक सञ्जालमा पोखिने गरेका हुन्छन् ।
अहिले बच्चादेखि वृद्धसम्म मोबाइलबाट सेल्फी खिचेर सामाजीक सञ्जालमा अपलोड गर्ने भनेपछि सबै हुरुक्क हुन्छन् । बिशेषगरी सेल्फी क्रेज यूवापुस्तामा अत्याधिक देखिन थालेपछि अहिले मोबाइल फोन निर्माता कम्पनी हरुले पनि सेल्फीयुक्त धेरै मोवाइल बनाएको पाईन्छ ।
तेस्तै सेल्फीको कुरा गर्दा पोखराको पर्यटकीय नगरी लेकसाइड जोड्ने सडक (जिरो किलोमिटर बाट हल्लनचोक) सम्म जो पर्यटकको राजधानी लेकसाईड जोडिन्छ यो सडकमा जहिले पनि धेरै खाल्टा, खुल्टी परीरहेका हुन्छन् चाहे हिउँदको समय होस चाहे बर्षाको समय । तर ति खाडलहरु लगभग महिनाको एक चोटी (फाटेको कपडामा टालो हाले) जस्तै गरी पुर्ने गरिन्छ । यो सडकमा टालो हाल्ने बेलामा प्राय जसो जनप्रतिनिधिहरुले सडक मर्मत विकासे सेल्फी हालेको सामाजिक सञ्जालमा नदेख्ने विरलै होलान ।
स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताको दुःख भुलेर सुखसयलमा रमाउन तल्लीन छन् । नयाँ–नयाँ महँगा गाडी चढ्न तँछाडमछाड गर्दै छन् । तालिमको नाममा चर्को भत्ता खाइरहेका छन् । ठाउँमा हुने विकासका नाममा आफु बदनामी भई अनियमितता गरिरहेका जनप्रतिनिधि पनि धेरै छन् । नातागोता र आफन्तलाई जागिर खुवाउन सक्रिय हुने उत्तिकै छन् । यस्ता क्रियाकलापले आफ्नै मतदातामाझ धेरै जनप्रतिनिधि आलोचित नभएका पनि होईनन् ।
तर, यो भिडमा केही जनप्रतिनिधि यस्ता पनि छन्, जसले राज्यबाट पाउने तलबसुविधा नै लिएका छैनन् । पाएको तलबभत्ता लगायतका सुविधा पनि जनताको सेवामा खर्चिएका छन् । केही जनप्रतिनिधिले कानुनबमोजिम पाएको तलबभत्तामा रकम थपेर पनि समाजसेवामा खर्च गरेको कुरा बेला मौकामा सुन्ने गरिन्छ ।
किन टालिन्छ पटक पटक सडक :
पोखरा—६, डिहीकोपाटन चोक नजीकै सडक मर्मत भनेर सेल्फी हालेको करीव ३५ दिन नपुग्दै सोही ठाउँमा (सेल्फी सहित) फेरी सडक ममर्त भएको देखिन्छ महिनाको एक पटक सडक टाल्ने यो प्रविधिले कहिले सम्म बिकाश होला त ?
२०७६ भाद्र १४ गते शनिवार यही ठाउँमा सडकमा रहेको खाल्डो समयमै मर्मत नहुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । सडकमा भएको खाल्डोको कारण शनिबार राती ग १२ प ६१७० नं. को स्कुटरको पछाडी सवार तनहुँकी कुशुम श्रेष्ठको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । स्कुटर लेकसाईडमा व्यवसाय गर्दै आएका भारतिय नागरिक गौरीशंकर ठाकुरले चलाएका थिए भने मृतक श्रेष्ठ पछाडी बसेकी थिईन् । चालक ठाकुरको लेकसाइडमा हेयर कटिङ तथा पार्लरका संचालक हुन भने श्रेष्ठ उक्त पार्लरमा काम गर्ने कर्मचारी थिईन । हल्लनचोकबाट आएको स्कुटर डिहिकोपाटनको सडकमा रहेको खाल्डोमा पर्दा अनियन्त्रीत हुँदा पछाडी बसेकी श्रेष्ठ खस्न गई सडकमा ठोक्कीदा मृत्यु हुन गएको थियो ।
पोखरामा यसभन्दा अगाडी पनि खाडलमा परेर एक जनाले ज्यान गुमाएका थिए । बाटोको खाल्डा खुल्डीमा परि सयौंको संख्यामा घाईते भएका छन् ।
यस्ता कुरामा सडक मर्मतको जिम्माबारे महानगर र सडक बिभाग कस्ले लिने ? यो कुरा अन्यौलमा छ ।
राम्रो मर्मत नहुँदा वर्षमा २, ३ पटकसम्म सडक टाल्नुपर्ने बाध्यता ! ठेकेदारले टिकाउ हुने गरी मर्मत नगर्दा पिच उक्किएर भत्कने र खाल्डो पर्ने गरेको देखिन्छ । सरकारले बर्सेनि सडक टाल्न १ किलोमिटर बराबर ३० हजार खर्च गरिरहेको छ । यो न्यूनतम खर्च हो । वर्षमा २ देखि ३ पटक टाल्दा यसको दोब्बर खर्च हुन्छ । सडक भने उस्तै छ । यही कारण बर्सेनि ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन् । वर्षातको समयमा बजेट सक्न कै लागि टाल्ने प्रवृत्तिले सडक कमजोर बन्ने गरेको छ ।
हजुरको घर अगाडि सडकमा खाल्डो छ ? २४ घण्टामा महानगरले बनाउँछ ।
यो भनाइ हो पोखरा महानगरपािलकाका मेयर मान वहादुर जी.सी.को दशैंको समयमा खाल्डोका कारण कोहीपनि दुर्घटनामा नपरोस भनेर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीको निर्देशनमा खाल्डो पुर्ने अभियान शुरु भएको थियो । मेयर जिसीले चुनावी घोषणा पत्रमा महानगरका सडक भत्किएको खबर आएको २४ घण्टाभित्र खाल्डो पुरिसक्ने घोषणा गरेको पनि आज कति बर्ष पुरा भयो ? यहाँहरुलाई अवश्य पनि थाहै छ । जवकी यहाँहरुको भारी मतले विजयी बनाउनु भएको थियो ।